Olan’ny MJS sy ny «Mouvement sportif»: manao antso avo Randrianirina Haja, DG teo aloha | NewsMada
Olan’ny MJS sy ny «Mouvement sportif»: manao antso avo Randrianirina Haja, DG teo aloha
Tsy nitazam-potsiny ny fifanolanana misy eo amin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena sy ny “Movement sportif” amin’izao fotoana izao Randrianirina Haja, tale teo aloha ny kabinetra fa manao antso avo eo amin’ny andaniny sy ny ankilany hifanatona ka hijery miaraka izay ho vahaolana. “Mila fitoniana ny fanatanjahantena, raha tiana handroso sy hivelatra ary hiaina tsara”, hoy izy.
Tokony hatao rehareha sy hotazonina ary hitarina kokoa ireny fahombiazana sy ezaka ary vokatra tsara vitan’ny ekipa sy ireo atletantsika ireo ka nahatonga ny lazan’i Madagasikara hanakoako eran-tany, araka ny fanamarihan’ity tale jeneraly teo aloha ity. Hihemotra ary ho very avokoa ny ezaka efa vita hatramin’izay raha hiaina olana indray, izay nambarany fa tsy maintsy misy, saingy voavaha rehefa mifampiresaka ao anatin’ny “fo sportif”. Notsiahiviny ny fomba fitantanany teo anivon’ity minisitera fa natao ara-teknika tanteraka ary natao mazava toy izany koa ny fanmpiasana sy ny fandaniana ny vola rehetra. “Tsy maintsy misy vola avy amin’ny minisitera, hanampiana ny “mouvement sportif”. Tsy azo hadinoina koa ny
tetikasa “sport étude”, traikefa azo avy any ivelany nampiharina teto amintsika”, hoy izy. Nanitsy ny sekretera jeneraly amin’izao fotoana izaony tenany ny amin’ny tokony handraisany andraikitra tandrify azy fa tsy mety ny miala amin’izany.